Ahoana ny mety ho fiantraikan'ny backlinks amin'ny loharanon-tranonkalan'ny PR8 amin'ny tranokalanao SEO?
Ny rohy mankany anatiny dia tena zava-dehibe ho an'ny tranokala. Raha te hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalam-pifaneraserana sy ny lahatahiry ianao, ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny mahazo ny backlinks PR 8. Maro ireo loharanom-baovao avo vaventy ahafahanao mahazo ny backlinks dofollow. Na dia izany aza, tsy ny webmaster rehetra no mahafantatra ny fomba hahazoam-bokatra avy amin'ireo loharano ireo ary mieritreritra fa tsy mety izany na sarany.
Hodinihinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba hahazoana ireo rindran-kira ambony PR avy amin'ny loharanom-baovaon'ny Google sy ny sehatra toy ny Google+, sy ny hafa - long term care insurance ratings. Asehoy anao fa mora sy maimaim-poana ny miverina amin'ny Google. Andeha àry isika hanomboka!
Ahoana no hamoronana backlinks PageRank 8 dofollow avy amin'ny Google Drive?
Ireto dingana manaraka ireto dia hanampy anao hahazo ny rohy ivelany sy ny kalitaon'ny fifandraisana amin'ny Google ary manangana ny fahefanao. Ankoatra izany, ireo rindran-damina ireo dia hanampy anao hampitombo ny tranokalanao PageRank ary hampitombo ny fifamoivoizana ao amin'ny tranokalanao.
Midira ao amin'ny kaontinao Gmail na raha mbola tsy manana iray ianao, dia manorata ny antsipirihan'ny login Gmail.
Sokafy ny Gmail anao ary tsindrio ny fizarana "Drive".
Mamorona ilay lahatahiry vaovao amin'ny sidina Google. Azonao atao ny manome anarana any amin'ny lahatahiry.
Taorian'izany dia mamorona tahiry HTML ao anaty pejin-tsoratra. Eto ianao dia ampidino ny rohin'ny tranonkalanao ho an'ny lahatsoratra manan-danja. Mba hamitana ity tanjona ity dia mila mandefa code HTML manokana amin'ny blôginao na ny tranonkala ianao.
Free Backlinks amin'ny tranonkalanao
Rehefa vita ny fehezan-dalàna dia mila manamboatra an'io lahatahiry sy rakitra hita maso amin'ny Google ianao. Ataovy azo antoka fa mampiasa ny dofollow tag amin'ny rohy amin'ny tranokala ianao. Avy eo dia tsindrio ny bokotra "Mizara" ary zarao amin'ny vahoaka ny rakitrao.
Fikirakira mivantana misokatra ary misafidy "Safidy amin'ny Internet". Ny rakitrao dia misokatra ho an'ny rehetra amin'izao fotoana izao.
Tsindrio ny bokotra ary tsindrio ny bokotra "Details and activity".
Eto ankavanana, dia hahita ny fizarana "Details" ianao. Alefaso ny rohy ao.
Sokafy ny tabilao vaovao ao amin'ny navigateur ary ataovy eo amin'ilay URL kopia.
Tsidiho ny anaranao ary ampidiro.
Ho vokatr'izany dia ho hitanao ny pejy takiana miaraka amin'ny backlinks dofollow.
Ahoana no hamoronana backlinks PageRank 8 dofollow avy amin'ny Google Plus?
Google Plus dia sehatra sosialy azon'ny Google izay manome sehatra mampientam-po ho an'ireo manam-pahaizana SEO mba hamoronana rindrankajy bitika dofollow. Azonao atao ny manangana backlinks PR8 dofollow ao amin'ny faritra momba ny fizarana sy ny tantara. Ankoatra izany, afaka mamorona rohy ianao amin'ny pejy sy ny profil ampiasainao amin'ny lahatsorin-drakitrao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny hameno ny fampahalalana momba ny tenanao ao amin'ireo fizarana voalaza etsy ambony ary ampidino ny dofollow backlinks any amin'ny tranokalanao any.
Ahoana ny fomba hamoronana rindrina PageRank 8 dofollow avy amin'ny Wikipedia?
Misy ampahany manan-danja ao amin'ny tranokala na blôgy dia azo ampiasaina ho loharanom-baovao avy amin'ny Wikipedia. Amin'ny fikarohana ny sehatry ny fahaizanao, manampy amin'ny lohahevitra iray manan-danja sy manonona ny fahefana dia hamorona rindran-damintsary mendrika avo lenta PR10 ho an'ny loharano web.